Android vs iphone simba vashandisi - heino maapos ndosaka takaita sarudzo yedu
Kuru Nhau & Ongororo Vashandisi veApple VS iPhone simba - pano & maapos; ndosaka takaita sarudzo yedu
Vashandisi veApple VS iPhone simba - pano & maapos; ndosaka takaita sarudzo yedu
Android simba mushandisi
Zita:RadoSmartphone:Xiaomi Mi Max 2
Ndeipi Android foni yauri kushandisa uye nei?
Vamwe vangangoshamisika kuziva kuti kwemakore matatu apfuura ndanga ndichinyanya kushandisa iyo yava kukwegura Xiaomi Mi Max 2. Iyo ine hombe 6.44-inch inoratidzira uye hombe 5300mAh bhatiri, nhamba yatisingamboone ichipfuura ichipfuura kunyangwe munguva pfupi yapfuura. mafoni. Kusiyana neazvino 'makuru' mafoni ane masikirini anopfuura matanhatu masendimita, ayo akagadzirirwa kuve akapetana uye akareba masikirini, iyo Mi Max 2 yakaenzana zvine hupamhi, izvo zvinoita kuti ive yakanaka kune akawanda ekushandisa kesi zviitiko, uye yechokwadi hombe foni, kwete chete kureba.
Semunhu anofarira zvehunyanzvi uye muongorori, ini zvakare ndakagara ndakamboshandisa dzimwe mafoni eApple neIOS, kubva pabhajeti kusvika kumagumo, asi ndangonyatso gadzikana neMi Max 2 yangu kuti ndichinje zvachose. Ini ndave kuda kutanga kushandisa Google Pixel 4 semutyairi wangu wezuva nezuva, kunyangwe kana ndichida kukurudzira foni, iyo Samsung Galaxy Note ingangoita yakanaka Android smartphone kune vazhinji vashandisi vemasimba. Kana iwe & apos; uchifarira kuve nesimba rakazara uye kuita kwakasiyana siyana, isa mari muGlass Note 10+.
Sei uchisarudza Android semushandisi wemagetsi?
Kunyangwe ndichiyemura kushambidzika uye nyore kushandisa iOS kuri paPhones, ndinotenda kuti Android iri kundipa kutonga kuzere, uye kundibata semubati wenhare yangu. Pane zvinhu zvakawanda kwazvo zvaunogona kuita neako Android smartphone uine mashoma tinkering, kazhinji chete kuburikidza nemaapp. Hezvino zvimwe zvezvinhu zvandinoda nezve Android:
Ini ndinogona kugara ndichiita kuti foni yangu inzwe kutsva nekuigadzirisa
Yangu yazvino, uye inonyanya kuchengetedza imba screen ikozvino. Svetera kuruboshwe inoratidza mawidhi angu. Ipo iOS ichingove iko zvino yekuda kugadzirisa zvigadziriso zvepamba zviyero zvine iOS 14, pane Android iwe unogona kuwana yekuvhura app kuti uchinje zvachose kutaridzika kwescreen chekumba kwako uye nekunzwa. ndatenga Nova Launcher uye Smart Launcher , parizvino ichishandisa iyo yekupedzisira kune ayo akachena uye anowirirana-anotaridzika majeti. Icon mapakeji aripo, ayo anochinja maitiro emaapps ako. Yako Android foni inogona kumiririra zvakakwana hunhu hwako hwakasarudzika, kupfuura iro chete Wallpaper.
Ini ndinogona kuve nemajeti emaakaundi emaemaundi, pane yangu yekumba skrini
Ndiri kushamisika vashandisi ve iPhone vakanaka neizvi, asi ndichifanira kuvhura app kuti ndione maemail ako achinzwa kure neni. Kazhinji ini ndine maviri maakaunzi angu eemail makuru semajeti kungave pane yangu yekumba skrini kana muchikamu chewijeti icho & apos s swipe imwechete kure, ichiratidza maemail angu nekukanda. Uyu unongova muenzaniso mumwe weyakareruka-nguva yekuchengetedza iyo yandisingakwanise kukanganwa kana ndichishandisa iPhone.
Ini ndinogona kuita zvakawanda zvisingaite pa Android
Kuruboshwe ini ndiri kushandisa yakajairwa split-screen multitasking, kurudyi ini ndiri kuita maapplication mune windowsed mode. Ini ndinofarira iPad mushandisi, asi kunyangwe paPadOS multitasking yakaipa kupfuura zvazviri pafoni dzeApple, uye pa iPhone - it & apos; s inenge isipo. Mufananidzo-mu-pikicha pakupedzisira kuuya neIOS 14 , asi zvakadiniko nezve split-screen kana windowsed apps? Iwo anga aripo kwenguva yakati wandei makore paApple. Muchokwadi, ichi ndicho chikuru, chakanyanya kukosha chikonzero chandisingadi kuchinjira kune iPhone - kushomeka kwekuparadzanisa-screen multitasking.
Ini ndinokwanisa kuwana mazhinji mafaera nemafolda pafoni yangu
Senge pakombuta, ini ndinogona kutarisa zviri nyore pakati pemaforodha ese pafoni yangu, kutarisa mafaera mukati, kana kugadzira maforodha angu, toti, zvinyorwa. iOS ichangoburwa yawedzera maFiles app uye iyo & apos; zvichiri zvishoma, zvichiratidza maforodha kubva kune mashoma maapplication anoitsigira. PaApple, iwe unongogona kuwana kune mazhinji mafaera uye maforodha, kusanganisira iwo ari pane yako microSD kadhi, iyo hongu, chinhu chinhu mazhinji mafoni eApple anotendera iwe kuti ushandise.
Wepakati Android foni ine mukana wekutsiva komputa
Nemapurogiramu akaita seSamsung Dex kana Sentio yako Android foni inogona kushandura kuita komputa. Android 10 ine yakavanzika, isina kusimukira desktop desktop, saka tinoziva chimwe chinhu chakakura chingave chiri kuuya. Asi kunyangwe izvozvi, mafoni epamberi eSamsung ane rutsigiro rweDeX, iyo inoshandura yako smartphone kuti ive yekutsiva yekomputa paunenge uchida izvozvo. Batanidza kune yekutarisa, keyboard uye mbeva, uye foni yako & apos; chidzitiro chemba chinoshanduka kuita Windows komputa-senge desktop, uye maapplication anotanga kuvhura mumawindo, achichinja zvachose chiitiko chako chose.
Kunyangwe kana iwe & apos; usisiri kushandisa Samsung mureza, iwe unogona kurodha launcher senge ndinonzwa , Inoita basa rakafanana. Chero runako runhare rweApple rune mukana wepamutemo wekuve wako weSwiss Army banga rekushandisa, iyo iri foni yako uye komputa yako.
Ini ndinogona kutomhanya Linux pane yangu Android foni kana ndichida
Linux inomhanya pane Android foni kuburikidza neDebian noroot app. Ndo & apos; s yakawanda sei rusununguko vashandisi veApple vane. Kunyangwe iyo yapfuura sarudzo ichishanda nenzira zvirinani, kubheta desktop desktop inoshanda senge Debian Linux pane Android zviri nyore, nekuda kwemaapps senge Debian noroot . Seizvo zita rinoratidzira, iwe haufanire kudzura foni yako kana kunyatsoita chero chinhu kunze kwekungotora iyo app kubva kuGoogle Play nekuimhanyisa.
Asi nei mumwe angave achida kubhoja Linux pafoni yavo, kune chero chimwe chikonzero kunze kwekuda kuziva? Zvakanaka, ini & apos; ndakakwanisa kumhanyisa zvirongwa zve desktop zvakaita seChromium, Audacity uye Gimp pane yangu Android foni kuburikidza neambotaurwa Debian noroot app. Izvi zvinoshamisira zvega. Uye kana ndikasarudza kuonesa foni yangu & apos; s skrini kuTV panguva imwe chete, ndinowana imwezve ruzivo rwePC kubva kune yangu yakavimbika foni yeApple.
Kunyangwe iwe ukaona zvese izvi zvisina zvazvinobatsira izvozvi, funga mikana mune ramangwana. Sezvo mafoni emafoni eApple anoramba achiwedzera kusimba, rimwe zuva vanozogona kumhanyisa Linux uye desktop software zvisingaite, uye pamwe kunyange Windows.
Ini ndinogona kusarudza yangu default mimhanzi player
Ichi chiri nyore. Ko kana iwe ukadzora dzimwe dzeruzhinji nziyo dzemahara dziripo, taura SoundCloud? Ungatamba sei idzo pane yako iPhone? Pa Android ini handigone kungosarudza inoridza mimhanzi inoridza, asi ini ndinotova nemaforamu angu emumhanzi mune yeyangu screen widget, saka ndinogona kutarisa nenziyo dzangu uye kuridza dzandinoda, zvisinei nekwavanobva, ndisina kana kuvhura Anwendung.
Zviripachena izvo & apos; hazvisi zvese, asi ini ndinofunga ndataura pfungwa yangu. Nezviri nani kana zvakaipa, Google & apos; s Android inopa vashandisi uye vanogadzira nzira yakasununguka kupfuura zvinoita Apple pane iyo iPhone. Ini ndinonyatsonzwisisa kuti sei vashandisi veIfree vangangofarira iko kureruka uye kukwana kweIOS, sezvo zvese zvichiratidza zvirinani kuchengetedzeka, kugadzikana uye nyore-kwekushandisa.
Asi vashandisi vanoda kuita nepese pavanogona nharembozha yavo vanofanirwa kugara vachienda kuApple, kunyangwe hazvo isingafadzi uye isingaenderane ingatarise kana kunzwa dzimwe nguva. Neimwe nhamburiko, iwe unogona kuita Android yako, uye foni yako imwe-ye-ye-mutsa.
iPhone simba mushandisi
Zita:PreslavSmartphone:iPhone 11 Pro
Ndeipi iPhone yauri kushandisa izvozvi uye nei?
Ndiri kushandisa izvozvi iPhone 11 Pro. Ndichiri kuchema kushomeka kweiyo 3D Kubata pairi, asi - zvinosuwisa - iyo iPhone XS Max yandaishandisa kare yakanga isina tsitsi isina kubvarurwa ichibva kwandiri. Nekudaro, sekuda kana kwete, ndakadhonzerwa mu2019, ndichikava nekupopota.
Nei iyo iPhone? Zvakanaka, zvikonzero zviviri - iOS uye kamera. Ngativhurei chimwe nechimwe.
Iyo iPhone ine akanakisa makamera here?
Kune mashoma Android zvishandiso izvo chaizvo zvinoita zvirinani mune akawanda mamiriro. Asi ndinofungidzira kuti isu tese tinogona kubvumirana kuti iyo iPhone ine makamera ari nyore ari pamusoro mashanu, saka izvo zvakanaka zvakakwana, handiti?
Chii chaizvo chandinonyanyoda nezvavo? Izvo zvinowirirana zvakanyanya uye zvinotarisirwa. Ndinogona kunge ndichitarisa chiitiko nemaziso angu maviri eziso uye ndinogona kutofungidzira kuti iyo iPhone ichaibata sei.
Nhare dzeApple dzimwe nguva dzinokushamisa - zvinogona kunge zvichinakidza, zvinogona kuvhundutsa.
Izvi zvinonyanya kundibatsira sezvo ini ndichishandisa iyo iPhone sechishandiso. Ini ndinowanzo kurekodha B-roll vhidhiyo (kunyangwe A-roll ndisati ndatenga kamera) yeYouTube chiteshi neiyo chete iPhone, sezvo ini ndisingawanzo kukanda kamera yangu kutenderera. Ini ndinogona kuwana inotonhorera chiito kupfura neiyo Ultra-yakafara lens, ndinogona kuunza zvidzidzo padyo nefoni. Ini AirDrop avo kuMac yangu uye ivo vakagadzirira kuunzwa muFinal Cut.
Uye hongu, ini ndakashandisa akasiyana mafoni eApple kune zvakafanana zvinangwa zvisati zvaitika. Dzimwe nguva ndaitora mifananidzo yaingotaridzika zvirinani pane zvaizoitwa ne iPhone, dzimwe nguva ndaitowana jittery, yakasanganiswa nemavara. Handidi zvekushamisika.
Ehe, iOS zvakare inogona kuve neyemanera kamera anotonga. App - Nguva
Ichokwadi, mazhinji mafoni eApple anouya neakakura manyore modhi pane avo kamera kamera. Pane iPhone, unofanirwa hove yeiyo yakanaka vhidhiyo kurekodha app kana iwe uchida zvimwe zvemberi maficha. Asi mikana iripo - iwe uchakurumidza kuwana yakasimba, yakagadzikana, inoiswa-yakazara-app, iyo inokupa iwe zvese zvaunoda.
Ini ndichataura zvakawanda nezvemaapps muchikamu chinotevera -
Sei uchifarira iOS (iPhone) semushandisi wemagetsi?
Zvakanaka, haina maitiro - asi kutaura chokwadi, ini handina basa nemapikicha mapikicha. Yangu Windows PC yakave neiyo yakafanana Wallpaper kubvira 2010-ish. Yangu MacBook ichine stock Catalina Wallpaper. Fungidzira kuwanda kwandakaita mari muku 'gadzira' foni yangu.
Ini ndichati, ndichiri kutsamwiswa nemabatiro anoita iOS kuti maapikicha eapp ngaarayirwe mumitsara yakaoma uye haibvumidze nzvimbo dzisina chinhu kuti ugone kuronga maapps ako zvakanangana. Asi ndiyo piritsi yandakadzidza kumedza.
iOS inondipa maapplication andinoda
Hechino chinhu neIOS - chinowanzo kuve neanogadzira maapplication ayo akanyatsoita nani pane paApple. Pamwe nekuti vane zvakasarudzika maficha kana nekuti ivo vanongomhanya zvirinani.
Uye, wakatsamwa sezvaungave uri izvozvi, ini ndichakubvunza izvi - unogona kunditsvagira iyo Android vhidhiyo yekugadzirisa app, iyo inotsigira makiyi akakosha? Rega ndikuchengetedze imwe nguva - pane maviri. Imwe ndeye KineMaster, imwe yacho VivaCut. Hongu, ivo nehunyanzvi vanotsigira makiyi, asi chete ehupenyu - iwe pre-chirongwa mutsara mutsara kufamba kana kushandura saizi kune yako denderedzwa ... uye ndizvozvo. Iwe haugone kuve nayo zvine simba shandura mafirita, kupenya, musiyano, et cetera pakati pemakiyi akakosha.
Uye ini handisi kana kuzotaura nezvekuti zvinonamira uye zvinoremedza sei maapplication anonzwa kushandisa.
Kuwedzera pamusoro, VivaCut haina nyadzi 1: 1 kopi yeEnlight Videoleap - vhidhiyo-yekugadzirisa app iripo parizvino inongowanikwa paIOS uye iri chaizvo yakanaka kwazvo. Ini ndinoishandisa pane angu ese ekukurumidza edits pane iyo iPhone kana iPad uye ine zvese zvandinoda, zvakakodzera keyframing inosanganisirwa.
Zvakanaka, ko mamwe mapurogiramu? Ngatitarisei pane chimwe chandinofarira - mimhanzi uye, kunyanya, kuridza gitare.
Kwemakore, Android yanga ichirwira odhiyo yekunonoka nyaya, izvo zvaingoita kuti zvikone kuve neyakafanira-chaiyo nguva odhiyo yevaimbi maapplication papuratifomu. Apple yave neiyi kubvira chii… 2010? Iyo iPhone 4? Wow.
Mazuva ano, kana iwe ukatenga midrange Android uye wotangisa Anwendung senge Tonebridge (gita mhedzisiro app), iwe unenge uchikwaziswa neshoko rinoti 'Unogona kunzwa audio latency uchitamba' kana chimwe chinhu munzira. Zvakanaka, kana iwe ukatenga iyo iPhone SE (2020) ye $ 400, kana yekare, rova ​​iPhone kana iPad kubva paEbay, iwe uchazowana Ultra-yakaderera latency uye iyo gadget ichave ichishandisika zvakakwana seyakagadzirwa gitare processor kana demo kurekodha workstation.
Vatatu vebato vanogadzira vakacherekedza izvo uye kune plethora yemuimbi accessories uye maapplication eIOS uye iPadOS. Zve Android ... ehe, une sarudzo shoma, idzo dzakaita meh, uye dzinogona kana dzisingashande zvinogutsa.
Ndakaenda kunodzidzira nekaita chete gitare, odhiyo interface, uye ne iPhone. Ini munguva pfupi yapfuura akaita rwiyo rwakazara achishandisa chete iPad Pro , kungoona kana zvichiita. Ini ndaigona kunge ndakazviita pane iPhone, futi, asi nekuwedzera fidgeting pane diki skrini. Asi ini handikwanise kuita chero icho pane iyo Android.
Ini handishaye chaizvo split-screen
Ndave anofarira Android mushandisi kwenguva yakati. Ini ndakatobatanidza iyo Samsung Galaxy Note Edge kwemakore akati wandei ndokurumbidza nekuda kwezvinhu zvakawanda, yayo yakawanda-tasking yaisanganisira .
Kunyange dzimwe nguva zvinotsamwisa kuti iyo iPhone haigone kutsemura skrini yayo, saka ndinogona kutarisa nekukurumidza chimwe chinhu uye kudzokera kune zvandaiita, haisi yekuchinja-mutambo. Ngativei vakanaka, kazhinji yenguva yatinoda kupatsanura-skrini kubva kunharembozha yedu, imhaka yekuti tinoda kuti vhidhiyo yeYouTube irambe ichitamba isu tichiita chimwe chinhu (pindura email) nekukurumidza.
Kushandiswa kwenguva refu kwekuparadzanisa-skrini kana kuyangarara windows pane iyo diki diki kuratidzwa? Hongu… Handifungi kuti ndicho chinhu chandinofarira kuita mazuva ano.
Pairing pamwe nenhumbi
Nechimwe chikonzero, mamwe mafoni ari muvhu reApple achine mamwe matambudziko kana zvasvika pakubatana kweBluetooth. Samsung inoita kunge inonyanya kukanganisa pano - ndanga ndichinetseka zvakanyanya kubatanidza kune yechitatu bato smartwatch kana yekuita kamera ine nhare dzeSamsung kupfuura chero imwe mhando.
iPhones kune rimwe divi… zvakanaka, 'zvinongoshanda'. Ini ndichaona, kuti kazhinji haisi automated, zvinova zvinonetsa uye zvinogumbura. Semuenzaniso, unofanirwa kuenda kuZvirongwa uye kubatanidza yako iPhone kune yako yekuita kamera chiratidzo cheWi-Fi nemaoko, ipapo unofanirwa kudzokera muchirongwa chekamera yekuita uye woenderera nezvakange uchida kuita kubva ipapo. GoPro yakagadzirisa izvi mumakore achangopfuura (iyo app ikozvino yave kutonga pamusoro peiyo iPhone yeWi-Fi uye ichabatanidza kune yako GoPro kamera otomatiki), asi mamwe mamwe makamera haasati abata kumusoro.
Pazasi mutsara - inyaya ine ruzivo rwekare uye 'mukurumbira'. Pese pandinoona chinonakidza chinotsigira chinotsigira zvese zviri zviviri Android neIOS, ndine 95% chokwadi ichashanda zvisina mutsindo neiyo iPhone, asi ine hanya nezve kuibatanidza kune Android.
Kuve wakasununguka kugadzirisa uye nekuisa chero OS yaunoda pafoni yako inogona kuve inonakidza uye kuita kuti vamwe vanhu vagunun'une. Asi kana zvasvika pakushandisa imwe gadget sechishandiso, zvese zvinosvika pamibvunzo mitatu:
Chishandiso ichi chine maficha andinoda?
Chishandiso ichi chinokwana mukufamba kwangu ndisina kuchikanganisa?
Ichi chishandiso chinogona kuwedzera kukosha kune yangu maitiro?
Kwangu uye zvandinoita, iyo iPhone inopindura 'hongu' kumibvunzo yese mitatu. Izvi zvinoreva here kuti ndiwo magumo-ese-ese-ese smartphone kune wese munhu? Zvirokwazvo kwete. Ndeipi foni inopindura 'hongu' kumibvunzo yese mitatu yenyaya yako yekushandisa? Makomendi chikamu chakavhurika!
maitiro ekuparadza nzvimbo Android
kangani kuti fekitori itangezve foni
Spotify inoda kuteedzera kwaunogara 'nguva nenguva', izvo zvinonzwa zvisina basa zvachose
Samsung Galaxy Buds + vs AirPods Pro, AirPods, Jabra Elite Inoshanda 75t
Galaxy S7 uye LG G5 yakahwina & apos; haibate memory kadhi sekuchengetedza mukati, kunyangwe Marshmallow
Apple ichatsiva mamwe akanganisika iPhone 6 Plus mauniti neiyo iPhone 6s Plus kusvika Kurume
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve Samsung & apos; s Galaxy Tab S8 5G mhuri inogona kunge ichangobva kuburitswa